China Pet Cat Disc tsotra sy mahafinaritra ary latabatra saka saka saka saka saka saka lehibe olon-dehibe saka fahavaratra mafana saka kely latabatra saka kilalao sy mpanamboatra | MiaSein
Pet Cat Simple Disc Cool sy mampihomehy saka latabatra saka saka saka saka olon-dehibe saka fahavaratra mafana saka kely saka latabatra saka kilalao
Anaran'ny vokatra: Pet Cat Simple Disc Cool sy mampihomehy saka latabatra saka saka saka saka olon-dehibe saka fahavaratra mafana saka kely saka latabatra saka kilalao
Description:Aleo ny fitaovana sy ny kalitaon'ny sisal, izay tsy nohosoran'ny vahaolana simika ary manana tsiro asidra fibre sisal. Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana, fitaovana fiarovana tontolo iainana avo lenta dia maharitra ary manana fiainana serivisy lava kokoa, ny lakaoly fiarovana ny tontolo iainana vaovao dia tsy mahasosotra. Miorina sy milamina, miaraka amina famolavolana rafitra mekanika marina, dia azo antoka kokoa ny hisorohana ny fikororohana. Hihaona amin'ny toetra fandavahana ny lavaka saka, ary afaka miala sasatra rehefa reraka.
Ny fomba fampiofanana saka hampiasa ny sarin'ny fiakarana saka: ny fanofanana ny saka sy ny fakana ny solaitrabe na ny tsanganana hazo dia tokony hatomboka amin'ny fahazazanao. Ny fomba fametrahana ny hazo na zana-kazo eo amin'ny toerana hita maso indrindra mba hiakarany sy hidinan'ny saka mba hahitana ireo ampahany tiany ho takarina. Raha tsy izany dia azon'ny tompony atao ny manohina moramora ny lohan'ny saka amin'ny tanany, ary manindry ny lohany mba hanery azy hisambotra ilay hazo hazo. Aorian'ny fikororohana, ny tsiambaratelon'ny tongotry ny saka dia hosorana amin'ny faritra mikitroka. Noho ny fofon'ny tsiambaratelo dia handeha ho any amin'ny tsato-kazo ilay saka hanoratany.
Anaran'ny singa ： Kitapo miakatra saka
Style: Bee, ball hemp
Loko: habe (amin'ny cm): 27 * 16cm
Endri-javatra: Izy io dia afaka manome toerana ho an'ny saka hilalao. Ny endrika marobe telo sosona dia mety kokoa amin'ny toetran'ny saka miakatra, ary ny tsanganana amin'ny tadin'ny hemp dia afaka manosika ny saka ny saka
Karazan-damba: Takelaka + tsihy fahavaratra
Previous: Akanjo alika amin'ny fararano sy ririnina dia niova ho fizarana manify Teddy Bichon Hiromi Poodle Akanjo An'alika Alika Puppy T-tongotra efatra T-shirt Cross Cross Wukong Pet Coat
Manaraka: Fiompiana alika lehibe amin'ny alika biby fiompy
Afaka esorina sy diovina ny akany alika Lar ...
Toeram-piompiana biby goavam-be any New Pet Toilet Pet Po ...
Manala ny sisin'ny alika Teddy alika kely fanadiovana ...
Lohataona palitao saka saka sy lohataona kimono volo ...
Akanjo an'ny biby fiompy manao akanjo alika any Santa Cla ...